Orinasa sy orinasa mpamokatra haingon-trano China | Metaly sy teknika
Izahay (M&E) dia mpanamboatra matihanina ho an'ny firavaka vy sy vy. miaraka amin'ny fitantanana mialoha sy ny filozofia miorina amin'ny stratejika dia mahazo fampandrosoana maharitra amin'ny resaka vokatra avo lenta sy laza tsara.
M&E haingon-trano vy sy vy fanariana na sandoka vokatra vita amin'ny fitaovana avo lenta, novokarin'ny fomba nentim-paharazana mpiasa sy ny fomba savoka very izay afaka manome toky antsika mba hamokatra karazana goavambe avo lenta, singa tsara tarehy ilain'ny mpanjifanay.
Ny singa vy haingon-trano M&E dia manana fomba samihafa amin'ny vy maherin'ny an-jatony HT-20, kilasy faha-20 amreika 20 izay azo ampiarahina amin'ny electrodes vy, ny vokatra vy haingon-trano dia manana fomba andiany toy ny voninkazo, ravina, satroka, vozon'akanjo, horonana ary takelaka… ..mba habe an-jatony amin'ny fitaovana vy ambany karbôna 25-35 izay azo fehezin'ny elektrôtaly vy.
Ny singa fanaingoana vy sy vy vita amin'ny haingon-trano M&E dia aondrana any amin'ny firenena eropeana.north amerikana sy afovoany atsinanana sns .. nandritra ny taona maro. Tena afa-po amin'ny mpanjifa izy ireo.
Manolotra serivisy tsara indrindra izahay
Vakio tsara ny katalaoginay ary ampahafantaro anay ny fomba antsipiriany. Ny habe sy ny habetsahana ilainao. Raha mbola eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharahanay ianao, dia tsy hasiana katalaogy, sary, vaovao vaovao novolavolainay ary raisinay handefasana sarisary na sary vaovao. Manaiky izay baiko lehibe na kely izahay, manana ny fahaizan'ny famokarana ho an'ny baiko lehibe ary hahafantatra ny maha-ilaina ny kaba kely. Raha vantany vao voamarina ny baiko rehetra dia halefa ara-potoana ny fandefasana.
Izahay dia mirehareha amin'ny vokatra M&E amidy am-bidy tsara eo amin'ny tsenan'izao tontolo izao miaraka amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao. Manome toky anao izahay fa ho afa-po amin'ny vokatra tsara sy serivisy tena tsara ary vidiny tsara indrindra izahay.
Tongasoa eto ianao hanome ny soso-kevitra sy ny endrika vaovao
Previous: Vokatra fantson-drano sy fantsom-panafody
Manaraka: Casting amin'ny habe lehibe
Singa haingon-trano vy